News – Onlinenungak
President hlun Donald Trump Nih Teinak A Co Than **************************************************** President Donald Trump cu Democrats nih voi hnih tiang house ah impeachment an tuah i…
Kawlram Hlasak thiamngaimi May-lah-Tansin Nih Sandah apiah Mi pawl cu Ti le chuncawadangh hna.athil tah hi zoh chun awkatlak…
By bawi bawi on February 3, 2021
Chin ram le kawlram huap kan theih lar zetmi Dr. SaSa cu himdam ten INDIA cozah le Ralkap kil ven nak hnuai ahaum…
မဲစာရင်းစစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အာဏာလွှဲပေးခြင်းဖြစ်ဟု ယာယီသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ကြေညာ မဲစာရင်းတွေ စစ်ဆေးအတည်ပြုတာအပါအဝင် လိုအပ်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်ပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)ပုဒ်မ ၄၁၈ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့ကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ လွှဲအပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ ယာယီသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက…
Indonisia Phungning cun Nu le Nu Pa le Pa Tibantu A Duh Mi Poah Cu Hnawg bak ah voi 80 tuk dingin Nawl An Chuah.…
An I Cit Mi Vanlawng A Tlak Hlan Minutes Tlawmpal Teah Khin An Chunghar Hmanthlak Cu Instagram Ah A Tar Ta Mi Indonisia Nu Vawlei…
By chin tawi on January 10, 2021
Indonisia Khual phor vantlawng cu A tla iacheu dih iathimi tampi an um pin ah mah van lawngatla mi…
Trump with zoh ko hmanh uh law, Pence nih thimnakaphichuak with thleng ding in hehtiahaforh with. Atak te cu mike pence…
By chin tawi on January 5, 2021
အီရန်နိုင်ငံက ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာ တောင်ကိုရီးယား ဓာတုပစ္စည်း ကုန်တင် သင်္ဘောတစ်စင်းကို မနေ့ကပဲ ဖမ်းဆီးလိုက်ပါ တယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျကနေ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုကို ဓာတုကုန်စည်တွေ ပို့နေရင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာ သင်္ဘောသား စုစုပေါင်း အယောက် ၂၀ ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံသား ငါးယောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား…
India Nih Covid vaccine ramleng kuat ding cu chikkhataphih chung, Myanmar nih Vaccine ngah ding hi atlai lai i India cozah nih Serum…